2009 ခုနှစ် ဧပြီလ အတွင်းမှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာနဲ့ မြန်မာငွေ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 703.6667 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပြီး ဧပြီလ 30 ရက်နေ့မှာ အမြင့်ဆုံး 728 ကျပ် ထိ ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ဧပြီလ 1 ရက်နေ့မှာ အနိမ့်ဆုံး 683 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
2009 ခုနှစ် ဧပြီလ အတွင်းမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 1.517579 ပေါက်ခဲ့ပြီး ဧပြီလ 1 ရက်နေ့မှာ အမြင့်ဆုံး 1.52215 ထိ ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ဧပြီလ 30 ရက်နေ့မှာ အနိမ့်ဆုံး 1.47754 ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
Look at my page; Olo.ru
my blog post ... http://Old.9Luv.com/
Feel free to visit my web page :: penpalspoint.com
candy crush Tale was created and developed by King.com.
Itis also same to be the foremost downloaded free software of 2013.
Terrible Characters - Sometimesanotification collection will undoubtedly
Havealook at my web-site :: hay day cheats xsellize
Newspapers of 20090519
License Serial for AVG 8.5
Gtalk နဲ့ Teleconferencing လုပ်ရအောင်...